လူဦးရေ အလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ တရုတ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၁] ၁၄၁၇၄၁၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 17.9% Official population clock
၂ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၃၉၇၆၉၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 17.6% Official population clock
၃ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ[မှတ်စု ၂] ၃၃၅၆၉၆၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 4.23% Official population clock
၄ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၂၆၃,၉၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 3.33% UN Projection
၅ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၂၁၅၆၈၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 2.72% Official population clock
၆ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၁၅၂၄၁၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 2.71% Official population clock Archived2May 2019 at the Wayback Machine.
၇ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၁၉၀,၈၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 2.41% UN Projection
၈ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၁၇၃၀၀၂၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 2.18% Official population clock
၉ ရုရှားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၃] ၁၄၆,၈၀၄,၃၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 1.85% Official estimate Archived5June 2019 at the Wayback Machine.
၁၀ ဂျပန်နိုင်ငံ ၁၂၆,၇၄၀,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.6% Monthly provisional estimate
၁၁ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ၁၂၃,၅၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.56% Official projection Archived 22 June 2017 at the Wayback Machine.
၁၂ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၁၁၂၇၇၉၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 1.42% Official population clock
၁၃ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၁၀၂,၃၇၄,၀၄၄ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၇ 1.32% Census Population
၁၄ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၉၃,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.18% Annual official projection
၁၅ အီဂျစ်နိုင်ငံ ၁၀၃၉၇၇၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 1.31% Official population clock
၁၆ ဂျာမနီနိုင်ငံ ၈၂,၈၀၀,၀၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.04% Provisional official annual estimate Archived 11 July 2017 at the Wayback Machine.
၁၇ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၈၁,၃၄၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.030% UN Projection
၁၈ အီရန်နိုင်ငံ ၈၄၇၃၃၅၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 1.069% Official population clock
၁၉ တူရကီနိုင်ငံ ၇၉,၈၁၄,၈၇၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.01% Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
၂၀ ထိုင်းနိုင်ငံ ၆၉,၀၃၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.87% UN Projection
၂၁ ပြင်သစ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၄] ၆၇,၀၅၅,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.85% Monthly official estimate
၂၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ ၆၅,၆၄၈,၁၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.83% Official mid-year estimate
၂၃ အီတလီနိုင်ငံ ၆၀,၅၈၉,၄၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.76% Official estimate Archived 16 December 2018 at the Wayback Machine.
၂၄ တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၅] ၅၇,၃၁၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.72% UN projection
၂၅ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ၅၅,၄၂၆,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.71% Annual official estimate
၂၆ မြန်မာနိုင်ငံ ၅၃,၃၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.67% UN projection
၂၇ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၅၀,၇၀၀,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.65% Annual official estimate
၂၈ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၅၂၀၀၉၃၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.656% Official population clock Archived 16 January 2018 at the Wayback Machine.
၂၉ ကင်ညာနိုင်ငံ ၄၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.63% UN projection
၃၁ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ၄၄,၂၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.56% UN projection
၃၂ ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံ ၄၂,၈၆၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.54% UN projection
၃၃ ယူကရိန်းနိုင်ငံ[မှတ်စု ၆] ၄၂,၅၀၁,၇၆၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.54% Monthly official estimate
၃၄ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၄၁,၃၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.52% UN projection
၃၅ ဆူဒန်နိုင်ငံ ၄၀,၅၃၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.51% UN projection
၃၆ ပိုလန်နိုင်ငံ ၃၈,၄၂၄,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.48% Official estimate
၃၇ အီရတ်နိုင်ငံ ၃၇,၈၈၃,၅၄၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.48% Official annual projection Archived 19 March 2017 at the Wayback Machine.
၃၈ ကနေဒါနိုင်ငံ ၃၈၃၆၇၈၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.484% Official estimate
၄၀ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၃၃,၈၄၈,၂၄၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.41% Official estimate
၄၁ မလေးရှားနိုင်ငံ ၃၄၄၀၅၇၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.434% Official population clock
၄၃ ပီရူးနိုင်ငံ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.4% Official annual projection
၄၄ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.4% Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
၄၅ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.37% Annual official estimate Archived6July 2018 at the Wayback Machine.
၄၇ နီပေါနိုင်ငံ ၂၈,၈၂၅,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
၄၈ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% Official Estimate Archived4June 2016 at the Wayback Machine.
၅၀ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.34% Annual official projection
၅၁ မဒါဂတ်စကားနိုင်ငံ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.320% UN projection
၅၂ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၂၅,၄၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.32% UN projection
၅၃ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၂၆၄၇၇၈၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.334% Official population clock
55 ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၇] ၂၃,၅၅၀,၀၇၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.3% Monthly official estimate
၅၆ ကင်မရွန်းနိုင်ငံ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.290% Annual official projection
၅၇ နိုင်ဂျာနိုင်ငံ ၂၁,၅၆၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.27% UN projection
၆၀ ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.25% Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
၆၃ မာလဝီနိုင်ငံ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.235% UN Projection
၆၄ ချီလီနိုင်ငံ ၁၈,၃၇၃,၉၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.23% Official annual projection
၆၆ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၁၇၆၃၃၅၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.222% Official population clock Archived9October 2018 at the Wayback Machine.
၆၇ အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၁၇၉၀၅၉၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.226% Official population clock
၆၈ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ ၁၆,၁၇၆,၁၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.2% Official estimate
၆၉ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ ၁၅,၉၃၃,၈၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.2% Official annual projection Archived 13 November 2015 at the Wayback Machine.
၇၁ ဆီနီဂေါနိုင်ငံ ၁၅,၂၅၆,၃၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.190% Official annual projection
၇၃ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.18% Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
၇၅ တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ၁၂,၁၃၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.15% Official annual projection
၇၇ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၈] ၁၁,၃၉၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% UN projection
၇၈ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ၁၁,၃၆၂,၆၀၂ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Monthly official estimate
၇၉ တူနီးရှားနိုင်ငံ ၁၁,၂၉၉,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official estimate Archived 10 June 2016 at the Wayback Machine.
၈၀ ဟေတီနိုင်ငံ ၁၁,၂၄၄,၇၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official projection Archived 19 February 2015 at the Wayback Machine.
၈၁ ကျူးဘားနိုင်ငံ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.14% Annual official estimate Archived 31 July 2017 at the Wayback Machine.
၈၄ ဘီနင်နိုင်ငံ ၁၀,၆၅၃,၆၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.13% Official projection
၈၅ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၁၀,၅၇၉,၀၆၇ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official quarterly estimate
၈၆ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ ၁၀,၄၀၀,၉၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
၉၀ ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၁၀၅၃၃၀၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.133% Official Population Clock
၉၁ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၁၁၁၂၇၇၇၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.14% Official population clock Archived 19 October 2017 at the Wayback Machine.
၉၂ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ ၉,၈၂၃,၆၆၇ မတ် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
၉၃ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ၉,၇၉၉,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Annual official estimate
၉၄ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ ၉,၄၉၈,၆၀၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
၉၅ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ၈,၈၆၆,၃၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.112% Official annual projection
၉၆ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ၈,၇၈၃,၁၉၈ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.111% Quarterly provisional figure
၉၇ တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ၈,၇၄၂,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.11% Official estimate
၉၈ အစ္စရေးနိုင်ငံ ၉၅၅၀၅၀၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.12% Official population clock
၉၉ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ၈,၄၁၇,၇၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.106% Quarterly provisional figure
၁၀၀ ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.103% Annual official estimate
– ဟောင်ကောင် (တရုတ်နိုင်ငံ) ၇,၃၇၄,၉၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.093% Official estimate
၁၀၁ တိုဂိုနိုင်ငံ ၇,၁၇၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.091% Official estimate Archived 8 September 2015 at the Wayback Machine.
၁၀၂ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ ၇,၁၀၁,၈၅၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.09% Official estimate Archived 25 June 2018 at the Wayback Machine.
၁၀၃ ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ 0.089% Preliminary 2015 census result
၁၀၄ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၉] ၇,၀၅၈,၃၂၂ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.089% Annual official estimate
၁၀၅ ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၆,၉၅၃,၆၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.088% Official estimate
၁၀၆ အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ ၆,၅၈၁,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.083% Official projection
၁၀၇ လာအိုနိုင်ငံ ၆,၄၉၂,၄၀၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.082% Preliminary 2015 census result Archived 18 March 2020 at the Wayback Machine.
၁၀၈ လစ်ဗျားနိုင်ငံ ၆,၃၈၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.081% Official annual projection
၁၀၉ နီကာရာဂွါနိုင်ငံ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.079% Official estimate
၁၁၀ ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.077% Official estimate
၁၁၁ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ၅,၉၈၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.076% UN projection
၁၁၂ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ၅,၇၅၆,၁၇၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.073% Quarterly official estimate
၁၁၃ စင်ကာပူနိုင်ငံ ၅,၆၀၇,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.071% Official estimate Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
၁၁၄ ဖင်လန်နိုင်ငံ ၅,၅၀၅,၅၇၅ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.069% Monthly official estimate
၁၁၅ အီရီထရီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.069% UN projection
၁၁၆ ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၃၅,၃၄၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.069% Official estimate
၁၁၇ နော်ဝေနိုင်ငံ ၅,၂၆၇,၁၄၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.066% Quarterly official estimate
၁၁၈ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ၅,၀၉၉,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.064% UN projection
၁၁၉ ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ ၄,၈၉၀,၃၇၉ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.062% Official estimate
- ပါလက်စတိုင်း ၄,၈၁၆,၅၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.061% Official estimate
၁၂၀ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၅၁၉၂၀၈၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.0655% Official population clock
၁၂၁ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၇,၉၇၆ ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.06% Preliminary 2016 census result
၁၂၂ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၁,၁၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ 0.06% Preliminary 2012 census result
၁၂၃ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ ၄,၇၄၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.06% UN projection
၁၂၄ အိုမန်နိုင်ငံ ၄,၅၇၃,၀၇၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.058% Official estimate Archived9October 2016 at the Wayback Machine.
၁၂၅ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.052% Annual official estimate
၁၂၆ ကူဝိတ်နိုင်ငံ ၄,၁၃၂,၄၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.052% Official estimate
၁၂၇ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ ၄,၀၇၆,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.051% Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
၁၂၈ ပနားမားနိုင်ငံ ၃,၈၁၄,၆၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.048% Official estimate
၁၂၉ မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံ ၃,၇၁၈,၆၇၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.047% Annual official projection
၁၃၀ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၀] ၃,၇၁၈,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.047% Annual official estimate
၁၃၁ မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၁] ၃,၅၅၀,၉၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.045% Official estimate
၁၃၃ ဥရုဂွေးနိုင်ငံ ၃,၄၉၃,၂၀၅ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.044% Annual official projection
– ပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံ (U.S.) ၃,၄၁၁,၃၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.043% Official estimate
၁၃၄ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ ၃၄၇၅၆၅၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.044% Official population clock Archived5July 2017 at the Wayback Machine.
၁၃၆ အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၈၇၆,၅၉၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.036% Annual official estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
၁၃၈ ဂျမေကာနိုင်ငံ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.034% Official estimate
၁၄၀ နမီးဘီးယားနိုင်ငံ ၂,၃၂၄,၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.029% Official projection
၁၄၁ ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ ၂,၂၃၀,၉၀၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.028% Official annual projection Archived 19 September 2016 at the Wayback Machine.
၁၄၂ မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.026% Official estimate
၁၄၄ လတ်ဗီယာနိုင်ငံ ၁,၉၃၉,၅၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.024% Monthly official estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
၁၄၅ လီဆိုသိုနိုင်ငံ ၁,၉၁၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.024% Official estimate
– Kosovo[မှတ်စု ၁၂] ၁,၈၃၆,၉၇၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.023% Official annual projection Archived 18 October 2015 at the Wayback Machine.
၁၅၃ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၅ 0.015% Preliminary 2015 census result
၁၅၆ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ၉၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.011% UN projection
၁၅၇ ဖီဂျီနိုင်ငံ ၈၆၉,၄၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.011% Annual official estimate
၁၆၀ ဘူတန်နိုင်ငံ ၈၅၄၃၂၀ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၂၂ 0.0108% Official population clock Archived 16 August 2016 at the Wayback Machine.
၁၆၁ ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ ၇၄၆,၉၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.009% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
– အနောက်ဆဟာရ[မှတ်စု ၁၃] ၅၈၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0074% UN projection
၁၆၄ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ၅၉၀,၆၆၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0074% 
၁၆၅ ဆူရာနမ်နိုင်ငံ ၅၄၁,၆၃၈ ဩဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ 0.0068% Final 2012 census result
၁၆၆ ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ ၅၃၁,၂၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0067% Official annual projection Archived 10 September 2014 at the Wayback Machine.
– ထရန်နစ္စတြီးယား[မှတ်စု ၁၄] ၄၇၅,၆၆၅ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.006% Preliminary 2015 census result
၁၆၇ မော်လတာနိုင်ငံ ၄၂၉,၃၄၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0054% Official estimate
၁၆၈ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ၄၁၇,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0053% Official estimate Archived 11 November 2016 at the Wayback Machine.
၁၆၉ ဘလိဇ်နိုင်ငံ ၃၈၀,၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0048% Official estimate
၁၇၁ မော်လဒိုက်နိုင်ငံ ၃၄၄,၀၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ 0.0043% Preliminary 2014 census result
၁၇၂ အိုက်စလန်နိုင်ငံ ၃၄၀,၁၁၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.0043% Official quarterly estimate
– မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၅] ၃၁၃,၆၂၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ 0.004% Official estimate Archived 8 January 2016 at the Wayback Machine.
၁၇၄ ဗနွားတူနိုင်ငံ ၂၇၇,၅၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0035% Annual official estimate
– ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၂၇၁,၈၀၀ ဒီဇငဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0034% Official estimate
– အက်ဘ်ခါဇီယာ[မှတ်စု ၁၆] ၂၄၀,၇၀၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၁ 0.003% 2011 census result Archived9February 2012 at the Wayback Machine.
၁၇၅ ဆမိုးအားနိုင်ငံ ၁၉၆,၃၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0025% Official projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
၁၇၇ စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ ၁၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0023% UN projection
– ဂူအမ် (U.S.) ၁၈၄,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0023% Annual official estimate
– ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်) ၁၅၈,၉၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.002% Annual official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
– နာဂိုမို-ကရာဘက် သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၇] ၁၅၀,၉၃၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0019% Preliminary 2015 census result Archived 15 August 2016 at the Wayback Machine.
၁၇၈ ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံ ၁၁၃,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0014% Annual official estimate
– အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (U.S.) ၁၀၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0013% UN projection
၁၈၆ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ ၇၁,၂၉၃ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ 0.0009% Preliminary 2011 census result Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
– ဂန်းစီးနိုင်ငံ (UK) ၆၂,၇၂၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00079% Official estimate
– ဗမျူဒါး (UK) ၆၁,၉၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.00078% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
– ကေမန်ကျွန်းစု (UK) ၆၀,၄၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.00076% Official estimate
– အမေရိကန်ဆမိုးအား (U.S.) ၅၇,၁၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00072% Annual official estimate
– မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (U.S.) ၅၆,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00072% Annual official estimate
– ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၆,၄၈၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.00071% Annual official estimate
၁၈၇ မာရှယ်အိုင်းလန်း နိုင်ငံ ၅၄,၈၈၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00069% Annual official estimate
– တောင်အော်ဆက်တီးယား[မှတ်စု ၁၈] ၅၃,၅၃၂ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.00068% Preliminary 2015 census result
– ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၀,၀၄၅ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.00063% Monthly official estimate
၁၈၈ စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ်နိုင်ငံ ၄၆,၂၀၄ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၁ 0.00058% 2011 census result
၁၉၀ မိုနာကိုနိုင်ငံ ၃၇,၅၅၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00047% Annual official estimate
– စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၃၆,၄၅၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00046% Annual official estimate
၁၉၃ တူဗားလူနိုင်ငံ ၁၀,၆၄၀ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ 0.00013% 2012 census result
– Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၆,၂၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000079% Annual official estimate
– မွန်ဆာရတ် (UK) ၄,၉၂၂ မေ ၁၂ဝ ၂၀၁၁ 0.000062% 2011 census result Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
– Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၃,၈၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000049% Official estimate
– ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (UK) ၂,၅၆၃ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 0.000032% 2012 census result
– ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၂,၀၇၂ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.000026% 2011 census result
၁၉၅ ဗာတီကန်စီးတီး ၈၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ 0.000010% Official estimate Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
– ကိုကိုး(ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၅၅၀ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.0000069% 2011 census result
– ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (UK) ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.00000072% တရားဝင် ခန့်မှန်း
လူဦးရေအလိုက် နိုင်ငံများ စာရင်း